सबै भन्दा राम्रो सस्तो भ्याकुम क्लीनर 2022: खरिद गाइड र अविश्वसनीय प्रस्तावहरू
सस्तो भ्याकुम क्लीनर
भ्याकुम क्लिनर रोबोट
ब्रूम भ्याकुम क्लीनर
2 र 1
पानी फिल्टर संग
तरल पदार्थ को
घरपालुवा जनावरहरूको लागि
मिनी भ्याकुम क्लिनर
तपाई चाहानुहुन्छ सस्तो भ्याकुम क्लिनर किन्नुहोस्? भ्याकुम क्लिनर बजार वर्षौंमा द्रुत दरमा बढेको छ। हामीले बजारमा भ्याकुम क्लीनरहरूको चयन कसरी बढेको छ भनेर हेर्न सक्षम भएका छौं। त्यहाँ अधिक र अधिक विभिन्न ब्रान्ड र प्रकारहरू उपलब्ध छन्। ती सबैको आफ्नै विशेषताहरू छन् र धेरै अवस्थामा तिनीहरूसँग अधिक विशिष्ट प्रयोगहरू छन्, तर चयन धेरै फराकिलो छ। त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू छनौट गर्न थप छन्।
जब हामी नयाँ भ्याकुम क्लिनर किन्न जान्छौं, चयन जटिल हुन सक्छ। यद्यपि त्यहाँ केही पक्षहरू छन् जुन हरेक उपभोक्ताले चाहन्छन्। हामी गुणस्तरीय भ्याकुम क्लिनर चाहन्छौं तर त्यो धेरै महँगो छैन। यो प्रायः जनताको विशाल बहुमतको चाहना हो। यस कारणको लागि, हामी तपाईंलाई सस्तो भ्याकुम क्लीनरहरूको चयनको साथ तल छोड्छौं।
तिनीहरू सबै गुणस्तर मोडेल हुन् तर जसको मूल्यहरू पहुँचयोग्य छन्। ताकि तपाईको भ्याकुम क्लिनर नवीकरण गर्न अत्याधिक प्रयास गर्नुपर्दैन। हामी तल यी सबै मोडेल बारेमा थप बताउँछौं।
उत्तम सस्तो भ्याकुम क्लीनर
हामीले धेरै मोडेलहरूको चयन गरेका छौं। ती सबै मोडेलहरू हुन् जुन प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै पहुँचयोग्य मूल्यको लागि बाहिर खडा हुन्छन्, तर यसको अर्थ बिना गुणस्तर त्याग्छन्। तल हामी तपाईंलाई यी प्रत्येक मोडेलको सबैभन्दा विस्तृत विवरणहरूको साथ तालिकाको साथ छोड्छौं। तालिका पछि हामी थप विवरणमा व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक बारे कुरा गर्छौं।
यी डेटाका लागि धन्यवाद तपाईंले कुन मोडेल किन्नमा सबैभन्दा बढी चासो राख्नुहुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
Xiaomi रोबोट भ्याकुम मोप...
Cecotec रोबोट भ्याकुम क्लीनर र ...
Lefant F1 रोबोट भ्याकुम...
ब्रुम भ्याकुम क्लिनर बिना...
वृष गृहभूमि अनन्त -...
Cecotec भ्याकुम क्लिनर बिना ...
रोवेन्टा स्विफ्ट पावर...
AEG LX7-2-EB-P भ्याकुम...
सबै भन्दा राम्रो सस्तो भ्याकुम क्लीनर
1 उत्तम सस्तो भ्याकुम क्लीनर
2 सबै भन्दा राम्रो सस्तो भ्याकुम क्लीनर
2.2 इकोवाक्स Deebot OZMO 900
2.4 रोवेन्टा कम्प्याक्ट पावर साइक्लोनिक RO3753
2.5 Kcherrcher WD3
2.8 VicTsing कर्डलेस ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लीनर
2.9 रोवेन्टा एयर फोर्स चरम RH8828
3 aspirator को प्रकार
3.72र 1
3.8 झोला छैन
3.9 पानी को
4 उत्तम भ्याकुम क्लीनर ब्रान्डहरू
5 भ्याकुम क्लीनर कसरी छनौट गर्ने
5.3 फिल्टर प्रकारहरू
5.5 केहि पनि तपाईलाई विश्वस्त छैन?
एक पटक यी प्रत्येक भ्याकुम क्लीनरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशिष्टताहरू देखाइएपछि, हामी अब यी प्रत्येक मोडेलहरूको बारेमा थप गहिराइमा कुरा गर्न जान सक्छौं। यसरी तपाईले यी मोडेलहरू र तिनीहरूको सञ्चालनको बारेमा थप जान्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, यदि त्यहाँ तपाइँको आवश्यकताहरु मा फिट छ भने, तपाइँ यसलाई तुरुन्तै थाहा पाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
हामीले यस रोबोट भ्याकुम क्लिनरको साथ सूची खोल्छौं Cecotec, जुन विभिन्न रोबोट भ्याकुम क्लिनरहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा परिचित ब्रान्ड हो। यो एक मोडेल हो कि, सबै रोबोट जस्तै, एक धेरै सहज विकल्प हो। किनभने हामीले के गर्नु पर्छ यो कार्यक्रम हो र यसले हाम्रो घरको भुइँ सफा गर्न थाल्छ। यो चार पटकमा सफा हुन्छ र कुल6सफाई मोडहरू छन्। यसले भ्याकुम मात्र होइन, मोप्स र स्वीप पनि गर्छ। त्यसैले, घरको पूर्ण सरसफाइ गर्नुहोस्। थप रूपमा, यसले सबै प्रकारका फ्लोरहरूमा पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
घर वरपर सफा गर्दा, यसको टेक्नोलोजीको लागि धन्यवाद, यो फर्निचर, मान्छे, कुनाहरू वा सिँढीहरू तल खस्दैन। त्यसकारण, हामी पछाडि बसेर रोबोटलाई आफ्नो काम गर्न दिन सक्छौं। यसमा एक ब्याट्री छ जसले यसलाई 160 मिनेटको दायरा दिन्छ। जब ब्याट्री सकिन लागेको हुन्छ, रोबोट पूर्ण रिचार्ज गर्नको लागि सीधै आफ्नो आधारमा फर्कन्छ। त्यसैले हामीले यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यसमा उच्च क्षमता भएको ट्याङ्की छ, जसले हामीलाई पूरै घरलाई खाली नगरी खाली गर्न अनुमति दिन्छ।
फिल्टरको रूपमा यसमा HEPA फिल्टर छ, यसको मतलब हामी यसलाई सजिलै सफा गर्न सक्छौं। यसलाई ट्याप मुनि राख्नुहोस् र यसलाई सुकाउन दिनुहोस्। यसरी, यो पहिले नै सफा छ र फेरि प्रयोग गर्न तयार छ। यो एक धेरै सहज तरिका हो जसले हामीलाई फिल्टरहरूमा पैसा बचत गर्न अनुमति दिन्छ। यो रोबोट पनि बाहिर खडा छ किनभने यो शोर छैन। रोबोटमा धेरै ब्रश, चार्जिङ बेस, रिमोट कन्ट्रोल र एडेप्टर लगायतका सामानहरू समावेश छन्।
इकोवाक्स Deebot OZMO 900
यद्यपि यो सूचीमा यो एक मात्र होइन, यो Ecovacs फ्लोर क्लीनरको सबैभन्दा उत्कृष्ट विशेषताहरू मध्ये एक यो हो कि यो एलेक्सा र मोबाइल अनुप्रयोगहरूसँग उपयुक्त छ, त्यसैले हामी यो कहाँ छ भनेर जान्न सक्छौं। थप रूपमा, यसमा अर्को प्रकारको बुद्धिमत्ता पनि छ, यस अवस्थामा Smart Navi 3.0 नेभिगेसन जसले लेजरलाई धन्यवाद दिन्छ जसले तपाईंलाई कहाँ जाँदैछ भनेर जान्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो घरको नक्सा बनाउनुहोस्.
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, ECOVACS एपको साथ मोबाइलबाट भर्चुअल बाधाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ हामीले चाहेको ठाउँमा मात्र रोबोटले सफा गर्छ भनेर क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिन वा ब्लक गर्न। अर्कोतर्फ, हामी यसको चार सफाई मोडहरू मध्ये एउटा प्रयोग गर्न सक्छौं कि यसले कहाँ, कसरी र कहिले सफा गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न।
दोस्रो स्थानमा हामीले यो मोडेल एउटै ब्रान्डबाट पाएका छौं, यद्यपि यस पटक यो 2-इन-1 ब्रूम भ्याकुम क्लिनर हो। यसको मतलब यो हो कि यसमा एक ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लिनर समावेश छ जसलाई हामीले निकाल्न सक्छौं र यसरी केही विशेष क्षेत्रहरू जस्तै सफा गर्न सक्छौं। सोफा वा कार सीटहरू। यसका लागि धन्यवाद हामी घरको धेरै गहिरो सफाई गर्न सक्छौं। यो साइक्लोनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगको लागि बाहिर खडा छ, एक प्रविधि जसले यसलाई धेरै शक्ति दिन्छ। यसको अतिरिक्त, यसको मतलब यो समय संग शक्ति गुमाउँदैन। प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै मनको शान्ति प्रदान गर्ने कुरा।
यो एक हल्का मोडेल हो र घर मा प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। यसको वजन थोरै छ, जसले यसलाई धेरै व्यवस्थित बनाउँछ। विशेष गरी यदि हामीसँग सीढीहरू भएको घर छ, ताकि यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु असुविधाजनक नहोस्। यो मोडेल केबल संग काम गर्दछ, र केबल मापन छ कि6मिटर छ। त्यसैले हामी लगातार प्लग र अनप्लग नगरीकन आरामसँग र कोठाहरू बीचमा घुम्न सक्छौं। थप रूपमा, यो ब्रुम भ्याकुम क्लिनरले काठको फर्शहरू सहित सबै प्रकारका सतहहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
यसमा १ लिटर क्षमता भएको निक्षेप छ। यसले हामीलाई कुनै पनि समस्या बिना एक भन्दा बढी अवसरहरूमा सम्पूर्ण घर सफा गर्न पर्याप्त क्षमता प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, ट्याङ्कीको निकासी धेरै सरल छ र हामी यसलाई कसरी सफा गर्छौं। यो फिल्टरहरूसँग पनि हुन्छ, जसको मर्मत सरल छ। किनकि यो HEPA फिल्टर हो। त्यसकारण, हामीले तिनीहरूलाई सफा गर्नुपर्छ। शोरको सन्दर्भमा, यो सबैभन्दा विवेकी छैन, तर यसले सामान्य भ्याकुम क्लिनरको रूपमा आवाजको समान मात्रा उत्पन्न गर्दछ। यो भण्डारण गर्न धेरै सजिलो छ किनकि यसले कुनै ठाउँ लिँदैन। यो भ्याकुम क्लिनर केही अतिरिक्त नोजलहरू समावेश गरी आउँछ।
रोवेन्टा कम्प्याक्ट पावर साइक्लोनिक RO3753
तेस्रो स्थानमा हामीले कम्तिमा डिजाइनको सन्दर्भमा यो अधिक परम्परागत रोवेन्टा भ्याकुम क्लिनर पाउँछौं। यसले साइक्लोनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछ, जसले यसलाई ठूलो शक्ति र सक्शन पावर दिन्छ। थप रूपमा, यसले समयको साथ यो शक्ति गुमाउँदैन। तसर्थ, हामी अधिकतम आराम संग लामो समय को लागी यसको प्रयोग को मजा लिन सक्छौं। धेरै मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण ग्यारेन्टी। यसले सबै प्रकारका सतहहरूमा धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ, तर विशेष गरी कडा फर्शहरूमा (ढुङ्गा, टाइल...)। त्यसोभए यदि तपाइँसँग त्यस प्रकारको भुइँ छ भने, यो तिनीहरूको लागि एक आदर्श भ्याकुम क्लिनर हो।
Rowenta RO3753 कम्प्याक्ट ...
यसले १.५ लिटर क्षमता भएको ट्याङ्कीसँग काम गर्छ जुन हामीले सजिलै खाली गर्न सक्छौँ। थप रूपमा, यो कुनै पनि समस्या बिना सम्पूर्ण घर सफा गर्न सक्षम हुन पर्याप्त मात्रा हो। यसमा HEPA फिल्टर पनि छ, जसको मतलब हामीले यसलाई धुन सक्छौं। फोहोर हटाउन ट्याप मुनि फिल्टर राख्नुहोस्। यो गरिसकेपछि, हामी यसलाई सुकाउन दिन्छौं र यसलाई भ्याकुम क्लिनरमा फिर्ता राख्छौं। यो सबै कहिल्यै सक्शन पावर गुमाउनु बिना। Rowenta भ्याकुम क्लिनर कर्ड गरिएको छ, यसमा 1,5 मिटर कर्ड छ। यसले हामीलाई ठूलो सहजताका साथ घर वरिपरि घुम्न अनुमति दिन्छ।
यसको तौल 6,8 किलोग्राम छ, तर फिगरबाट मूर्ख नहुनुहोस्, किनकि यो घरको वरिपरि ह्यान्डल गर्न र घुम्न सजिलो मोडेल हो। पाङ्ग्राहरु संग यसको डिजाइन को लागी धन्यवाद, यो एक उच्च मोबाइल भ्याकुम क्लीनर हो। थप रूपमा, जब यो भण्डारणको कुरा आउँछ यसले धेरै ठाउँ लिदैन, त्यसैले यसलाई भण्डारण गर्न ठाउँ खोज्न सजिलो छ। यसले सामान्य भ्याकुम क्लिनरको रूपमा उस्तै आवाज उत्पन्न गर्दछ, त्यसैले त्यस सन्दर्भमा कुनै आश्चर्य छैन। यो धेरै कष्टप्रद शोर होइन।
चौथो स्थानमा हामीले यो भ्याकुम क्लिनर भेट्टाउँछौं जसको मुख्य प्रयोग औद्योगिक भ्याकुम क्लिनरको रूपमा हुनेछ, यद्यपि हामी यसलाई धेरै फरक परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौं। तर, यो विशेष गरी एक धेरै शक्तिशाली मोडेलको लागि बाहिर खडा छ जसले उत्कृष्ट सक्शन पावर प्रदान गर्दछ। यसरी तपाईले जम्मा भएको सबै फोहोरलाई सजिलै र धेरै प्रभावकारी रूपमा हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ। थप रूपमा, यसले भिजेको फोहोरसँग पनि काम गर्दछ, त्यसैले यसले हामीलाई यस सन्दर्भमा परम्परागत भ्याकुम क्लिनर भन्दा धेरै प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले यो धेरै बहुमुखी छ।
Kärcher MV3भ्याकुम क्लीनर ...
यसमा ठूलो क्षमताको ट्याङ्की छ, त्यसैले यो औद्योगिक प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो जहाँ धेरै फोहोर जम्मा हुन्छ। यसले हामीलाई प्रत्येक केही मिनेट खाली नगरी ठूला ठाउँहरू सफा गर्न सक्षम हुने विकल्प दिन्छ। त्यसैले सरसफाई हरेक तरिकामा धेरै प्रभावकारी छ। भ्याक्युमिङको अतिरिक्त, यसमा एक ब्लोइङ प्रकार्य पनि छ जुन धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। त्यसैले तपाईं धेरै गहिरो सफाई गर्न सक्नुहुन्छ।
यो 7,66 किलोग्राम वजन भएको मोडेल हो। तर, यो संख्याको बावजुद, यो एक मोडेल हो कि हामी धेरै सजिलै संग ह्यान्डल गर्न सक्छौं। थप रूपमा, यसको चार-पाङ्ग्रे डिजाइनको लागि धन्यवाद, यो धेरै मोबाइल र धेरै स्थिर छ। तसर्थ, हामीले यसलाई प्रयोग गर्दा यो कुनै पनि समयमा खस्नेछैन वा टिपिनेछैन। त्यसैले हामी सरसफाइमा मात्र ध्यान दिन्छौं। यसमा ४ मिटर लम्बाइको केबल छ। यो सबैभन्दा लामो छैन, तर यसले हामीलाई पर्याप्त गतिशीलता दिन्छ।
यो Braava 390t धेरै ठूला कोठाहरू सफा गर्न डिजाइन गरिएको हो। यसमा ट्रिपल स्क्रबिङ पास छ र यसको iadapt 2.0 नेभिगेसन क्यूब्सको साथ जसले यो सानो रोबोटलाई यसको स्थान ट्र्याक राख्न मद्दत गर्दछ। एक विकल्पको रूपमा, यदि हामी केवल फोहोर, धुलो, हाम्रो घरपालुवा जनावरको कपाल र एलर्जीहरू हटाउन चाहन्छौं वा 33m² सम्म स्क्रब गर्न यसको ट्रिपल पास प्रयोग गर्न चाहन्छौं भने हामी एकल पास छनौट गर्न सक्छौं।
अन्य सुविधाहरूको लागि, यसमा4माइक्रोफाइबर कपडाहरू समावेश छन्, जसमध्ये दुई स्क्रबिङका लागि र दुईवटा मोपिङका लागि छन्, जसको अर्थ मप सुकाउन सक्छ.
निम्न मोडेल एक धेरै पारम्परिक भ्याकुम क्लिनर हो जुन धेरै कुशल र समस्या-रहित सञ्चालन प्रस्तावको लागि बाहिर खडा छ। यो एक धेरै क्लासिक मोडेल हो जसको साथ घर सफाई गर्न। यसले हामीलाई सबै प्रकारका फ्लोरहरूमा खाली गर्न अनुमति दिन्छ र पर्याप्त शक्ति छ। यो सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली छैन, तर यसले कुनै पनि समयमा vacuuming बिना कुनै पनि फोहोर छोड्दैन। त्यसैले यसले पूर्ण रूपमा आफ्नो मिशन सधैं पूरा गर्दछ।
अमेजन बेसिक्स –...
यसमा १.५ लिटरको क्षमता भएको ट्याङ्की छ, जसले हामीलाई घर भरी नहुँदासम्म धेरै पटक सफा गर्न दिन्छ। यस निक्षेप को निकासी र सफाई धेरै सरल छ। त्यसैले यसलाई धेरै मर्मतसम्भारको आवश्यकता पर्दैन। HEPA फिल्टरसँग पनि त्यस्तै हुन्छ जुन यसमा समावेश छ। जब हामीले थाहा पाउँछौं कि यसमा धेरै फोहोर जम्मा भएको छ, यसलाई भिजाउनु राम्रो हुन्छ, यसलाई सुकाउन दिनुहोस् र फेरि प्रयोग गर्नुहोस्। यसरी यो पहिलो दिनको रूपमा अधिकतम सक्शन पावरमा फर्कन्छ। एक धेरै सरल विधि।
यसले केबलहरूसँग काम गर्दछ, यस अवस्थामा यसमा5मिटर केबल छ। यसले हामीलाई आरामसँग घर वरिपरि घुम्न अनुमति दिन्छ र हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता दिन्छ। तौलको लागि, यो मोडेल 4,5 किलोग्राम छ। तसर्थ, यो सबैभन्दा भारी भ्याकुम क्लीनरहरू मध्ये एक होइन, ताकि घरको वरिपरि घुम्न सजिलो छ र यदि हामीले सीढीहरू चढ्नु पर्छ भने यसलाई हामीसँग लैजानुहोस्। थप रूपमा, पाङ्ग्राहरूसँग यसको डिजाइनको लागि धन्यवाद, यो धेरै मोबाइल छ, त्यसैले, यो चिन्ता र यसलाई सधैं बोक्न आवश्यक छैन। यसले परम्परागत भ्याकुम क्लिनरको जस्तै आवाज उत्पन्न गर्छ। थप रूपमा, यो मोडेल सहायक उपकरणहरू सहित आउँछ।
VicTsing कर्डलेस ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लीनर
अन्तिम स्थानमा हामीले यो ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लिनर फेला पार्छौं। कम साइजको भ्याकुम क्लिनर र जुन सामान्य भ्याकुम क्लिनर पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा यसलाई प्रयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। त्यसैले, यो सोफा वा कार सीटहरूमा प्रयोग गर्न एक राम्रो विकल्प हो। साइटहरू जसको सरसफाई अलि बढी जटिल छ र अझ बढी परिशुद्धता चाहिन्छ। यस मोडेलको लागि धन्यवाद यी क्षेत्रहरूलाई सधैं सफा राख्नको लागि पुग्न धेरै सजिलो हुनेछ।
सानो आकारको मोडेलको लागि यो धेरै शक्ति छ। त्यसैले यसले हामीलाई सबैभन्दा जटिल फोहोरको साथ पनि समाप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले सोफा सधैं चम्किलो हुनेछ। यसको अतिरिक्त, यसको वजन धेरै कम छ, यसको प्रयोग धेरै सहज र सरल बनाउँछ। यो धेरै व्यवस्थित छ, जसले पनि धेरै मद्दत गर्दछ, किनकि यी क्षेत्रहरूमा सफा गर्ने कार्य सधैं सजिलो हुँदैन। यो मोडेल केबल बिना काम गर्दछ। यसमा ३० मिनेटको स्वायत्तता भएको ब्याट्री छ जसलाई हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ।
यसमा एक निक्षेप छ जुन हामी कुनै पनि समयमा ठूलो सजिलै संग खाली गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यसको सफाई र मर्मत धेरै सरल छ। त्यहि फिल्टर को लागी जान्छ जुन समावेश छ। यो धुने फिल्टर हो। त्यसोभए जब हामी देख्छौं कि यसले केही शक्ति गुमाएको छ, हामी ट्याप मुनि फिल्टर धुन्छौं, यसलाई सुकाउन र यसलाई फिर्ता राख्छौं। यसरी, यो पूर्ण रूपमा फेरि काम गर्दछ। यसले विभिन्न सतहहरू र कार्यहरूका लागि नोजलहरू जस्ता धेरै सामानहरू समावेश गर्दछ।
रोवेन्टा एयर फोर्स चरम RH8828
अन्तिम स्थानमा हामीले यो Rowenta ब्रूम भ्याकुम क्लिनर फेला पार्छौं। यो अचम्मको मोडेल हो किनभने यो धेरै शक्तिशाली छ, जसले गर्दा हामी हाम्रो घरमा जम्मा भएको धुलो र फोहोर हटाउन सक्षम हुनेछौं। यसले सबै प्रकारका सतहहरूमा धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ यसको ब्रशको लागि धन्यवाद, त्यसो गर्न डिजाइन गरिएको। तसर्थ, यदि तपाईंसँग काठको फर्शहरू छन् भने, तपाईं चिन्ता नगरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले हामीलाई प्रभावकारी र दिगो सफाईको ग्यारेन्टी दिन्छ।
रोवेन्टा एयर फोर्स चरम...
यो मोडेल केबल बिना काम गर्दछ। यसमा ४५ मिनेटको दायरा भएको ब्याट्री छ। सम्पूर्ण घर सफा गर्न पर्याप्त समय हुनुपर्छ। ब्याट्री सकिएपछि, हामी यसलाई चार्जमा राख्छौं। यसलाई पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न लगभग आठ घण्टा लाग्छ, जुन धेरै लामो हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई सधैं राति चार्ज गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईलाई घर सफा गर्न आवश्यक छ भने तपाईले यसलाई बिहान तयार पार्नुहोस्। यो मोडेल 45 लिटर को क्षमता संग एक हटाउन योग्य ट्यांक छ।
यसमा हामीले सफा गर्न सक्ने HEPA फिल्टर पनि छ। त्यसोभए तपाईंले यसलाई ट्यापमुनि भिजाउनु पर्छ, यसलाई सुक्न दिनुहोस् र यसलाई फेरि राख्नुहोस्। यसका लागि धन्यवाद हामी फेरि भ्याकुम क्लिनरको मजा लिन सक्छौं मानौं यो पहिलो दिन हो र यो ठूलो शक्ति र सटीकताका साथ खाली हुन्छ। शोरको लागि, यसले सूचीमा अन्य मोडेलहरू भन्दा बढी शोर बनाउँछ, यद्यपि यो कष्टप्रद शोर वा टाउको दुखाइ होइन।
aspirator को प्रकार
हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, आज धेरै प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येकको आफ्नै विशेषताहरू छन् जसले तिनीहरूलाई निश्चित परिस्थितिहरूको लागि अझ राम्रो बनाउँछ। त्यसकारण, हामीलाई कस्तो प्रकारको भ्याकुम क्लिनर चाहिन्छ वा खोज्दैछौं भन्ने बारे स्पष्ट हुन सजिलो छ। किनकि यसले हाम्रो खोजलाई अझ सटीक बनाउनेछ। हामी तल विभिन्न प्रकारका भ्याकुम क्लिनरहरूको बारेमा थप जानकारी दिन्छौं।
डस्ट माइट भ्याकुम क्लिनर
तरल भ्याकुम क्लीनर
घरपालुवा जनावर भ्याकुम क्लीनर
२ मा १ भ्याकुम क्लिनर
औद्योगिक भ्याकुम क्लीनरहरू
कार भ्याकुम क्लिनर
ताररहित भ्याकुम क्लीनरहरू
पानी फिल्टर भ्याकुम क्लीनर
चक्रवात भ्याकुम क्लीनर
स्लेज भ्याकुम क्लीनर
ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लीनरहरू
बैगलेस भ्याकुम क्लीनरहरू
रोबोट भ्याकुम क्लिनर र एमओपी
स्लेज भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
यी परम्परागत भ्याकुम क्लीनरहरू हुन् जुन हामी सबैलाई थाहा छ। यस अर्थमा, तिनीहरूले क्लासिक डिजाइन र आकार कायम राख्छन्। यद्यपि प्रविधि धेरै विकसित भएको छ र तिनीहरू सामान्यतया अधिक आधुनिक र शक्तिशाली छन्। तिनीहरू मोडेलहरू हुन् जसले सबै प्रकारका सतहहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ र जसको साथ हामी घरको धुलो मात्र होइन, तर सबै प्रकारका फोहोरहरू पनि।
ब्रूम भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
यी भ्याकुम क्लीनरहरू ब्रुमको आकार अनुकरण गर्नका लागि बाहिर खडा हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरू ठाडो र विस्तारित छन्। तिनीहरू सामान्यतया ब्याट्री पावरमा चल्छन् र परम्परागत भ्याकुम क्लिनर भन्दा केही कम शक्तिशाली हुन्छन्। यद्यपि तिनीहरू हल्का, व्यवस्थित र तिनीहरूको उत्कृष्ट सतह उपचारको लागि बाहिर खडा छन्।
रोबोट भ्याकुम क्लिनर हेर्नुहोस्
हालैका वर्षहरूमा धेरै उपस्थिति प्राप्त गर्ने वर्ग। तिनीहरू एक धेरै सहज विकल्प हुन् किनभने हामीले यो कार्यक्रम गर्नु पर्छ र रोबोटले हाम्रो लागि घर सफा गर्ने काम गर्नेछ। तिनीहरू ब्याट्रीहरूसँग काम गर्छन् र सधैं प्लेटको रूपमा तिनीहरूको गोलाकार आकारको लागि बाहिर खडा हुन्छन्। यद्यपि, तिनीहरू पनि परम्परागत भ्याकुम क्लिनर भन्दा धेरै महँगो छन्।
यी सानो आकारको भ्याकुम क्लिनरहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो हातमा आरामसँग समात्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सामान्य भ्याकुम क्लिनरमा पुग्न नसक्ने कुनाहरूमा पुग्न डिजाइन गरिएको हो, जस्तै कार सीट वा सोफा। तिनीहरू व्यवस्थित छन्, थोरै तौल र तिनीहरूको मूल्य सामान्यतया धेरै सस्तो छ। केही स्टिक भ्याकुमहरू निर्मित ह्यान्डहेल्ड भ्याकुमसँग आउँछन्।
ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
चक्रवात भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
साइक्लोनिक भ्याकुम क्लीनरहरू हावाको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नका लागि बाहिर खडा हुन्छन् जसले सक्शन पावर बढाउँदछ, फोहोरलाई सजिलैसँग छुट्याउन मद्दत गर्दछ र साथै समय संग प्रभावकारिता गुमाउँदैन.
खरानी भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
यी प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरू फायरप्लेसहरू, बारबेक्यूहरू वा अन्य प्रकारका गतिविधिहरूबाट खरानी चुस्नका लागि डिजाइन गरिएको हो जसले खरानी जम्मा गर्छ। तिनीहरूसँग धेरै अधिक विशिष्ट प्रयोग छ, यद्यपि तिनीहरूले धुलो र फोहोर पनि चुस्छन्। तर यसको मुख्य कार्य खरानी वा भुराबाट छुटकारा पाउन हो।
2-in-1 भ्याकुम क्लिनरहरू हेर्नुहोस्
यी भ्याकुम क्लिनरहरू हुन् जसमा हामीले एउटा मुख्य भ्याकुम क्लिनर र ह्यान्डहेल्ड एक फेला पार्छौं। तिनीहरू सामान्यतया ब्रूम मोडेलहरू हुन् जुन एक एकीकृत ह्यान्डहेल्ड भ्याकुम क्लीनरको साथ आउँछन्। त्यसैले तपाईं पूरै घर अझ सही रूपमा सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग भुइँका लागि भ्याकुम क्लिनर र सोफा वा कम पहुँचयोग्य कुनाहरू जस्ता क्षेत्रहरूको लागि अर्को भ्याकुम क्लिनर छ।
बैगलेस भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
यो भ्याकुम क्लिनरको एक प्रकार हो जुन हामीले धेरै ब्रान्डहरूमा देख्छौं। फोहोर जम्मा हुने परम्परागत झोलाहरू हुनुको सट्टा तिनीहरूसँग हटाउन सकिने कन्टेनर छ। यसरी, जब यो भरिन्छ, हामी ट्याङ्की बाहिर निकाल्छौं र खाली गर्छौं। यसरी, हामी झोलामा पैसा खर्च गर्दैनौं। साथै, यी निक्षेप को मर्मत धेरै सरल छ।
पानी भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
हामी एक विशेष प्रकारको भ्याकुम क्लिनरको सामना गरिरहेका छौं किनभने यो ती मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ जसलाई धुलो वा माइट्सबाट एलर्जीको समस्या छ। यसले हामीलाई घर सफा गर्न अनुमति दिन्छ, तर यसले यसको पानी फिल्टरको लागि हावा शुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ। यसको लागि धन्यवाद हामीसँग घरको गहिरो सफाई छ र हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हावा सकेसम्म सफा राखिएको छ।
औद्योगिक भ्याकुम क्लीनरहरू हेर्नुहोस्
यी प्रकारका भ्याकुम क्लिनरहरू व्यावसायिक क्षेत्र, होटल वा रेस्टुरेन्ट वा उद्योगमा सफा गर्नको लागि बढी डिजाइन गरिएका छन्। किनकि तिनीहरू सबै चीजहरू अवशोषित गर्न सक्ने ठूलो शक्तिको लागि बाहिर खडा छन्। यो शक्ति को लागी धन्यवाद, धेरै अधिक कुशल र प्रभावकारी सफाई प्राप्त भएको छ। तसर्थ, घरेलु प्रयोग यसको फाइदा उठाउने उत्तम तरिका होइन।
उत्तम भ्याकुम क्लीनर ब्रान्डहरू
जब हामी नयाँ भ्याकुम क्लिनर खोज्दैछौं हामी ब्रान्डमा धेरै हेर्छौं। कहिलेकाहीँ हामी उही ब्रान्डको मोडेल किन्न चाहन्छौं जुन हामीसँग पहिले नै छ वा हामी ज्ञात ब्रान्डहरूमा शर्त लगाउछौं। निस्सन्देह, धेरै अवसरहरूमा ब्रान्डको ठूलो प्रभाव छ। किनकि हामी सामान्यतया हामीले चिनेका वा विश्वास गर्ने ब्रान्डहरू चयन गर्छौं। ब्रान्डहरूको छनोट आज धेरै फराकिलो छ, यद्यपि त्यहाँ केही छन् जो एक विशेष प्रकारको भ्याकुम क्लिनरमा विशेषज्ञ छन्।
रुम्बा भ्याकुम क्लिनर
वृषभ भ्याकुम क्लीनर
पोल्टी भ्याकुम क्लिनर
ड्रीम भ्याकुम क्लिनर
फिलिप्स भ्याकुम क्लिनर
Ikohs भ्याकुम क्लीनर
Makita भ्याकुम क्लीनर
LIDL भ्याकुम क्लिनर
इलेक्ट्रोलक्स भ्याकुम क्लीनरहरू
डाइसन भ्याकुम क्लीनरहरू
बॉश भ्याकुम क्लीनरहरू
Rowenta भ्याकुम क्लीनरहरू
कार्चर भ्याकुम क्लीनरहरू
Conga भ्याकुम क्लीनर
Xiaomi भ्याकुम क्लीनर
इकोभ्याक्स भ्याकुम क्लिनर
यो भ्याकुम रोबोटको उत्कृष्टताको निर्माता ब्रान्ड हो। कसलाई थाहा छैन roomba भ्याकुम क्लीनरहरू? तिनीहरू लगभग 25 वर्षको लागि बजारमा छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग उत्कृष्ट अनुभव छ। थप रूपमा, तिनीहरूका रोबोटहरू सामान्यतया सबैभन्दा उन्नत हुन्छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्ताव गर्नेहरू। त्यसोभए यदि तपाइँ रोबोट भ्याकुम क्लीनर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो निस्सन्देह तपाईले रोज्नु पर्ने ब्रान्ड हो।
बजार मा सबै भन्दा राम्रो ज्ञात ब्रान्डहरु मध्ये एक। धेरै वर्षहरूमा उत्कृष्ट अनुभव भएको फर्म, त्यसैले यसको मोडेलहरू गुणस्तर र उचित कार्यको ग्यारेन्टी हुन्। तिनीहरूले परम्परागत स्लेजदेखि लिएर झाडू, हातसम्म र केही2मा 1 धेरै प्रकारका भ्याकुम क्लिनरहरू उत्पादन गर्छन्। यहाँका उत्कृष्ट मोडेलहरू पत्ता लगाउनुहोस्। Rowenta भ्याकुम क्लीनरहरू.
अर्को ब्रान्ड जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छ र त्यो पनि गुणस्तरको पर्यायवाची हो। तिनीहरूसँग बजारमा व्यापक अनुभव छ र उपभोक्ताहरूको समर्थन छ, किनकि यो एक ब्रान्ड हो जसमा धेरैले शर्त लगाएका छन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले गुणस्तरीय उत्पादन खोज्दैछन्। तिनीहरूले धेरै प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरू (झाडू, स्लेज, ह्यान्डहेल्ड, औद्योगिक ...) उत्पादन गर्छन्, यहाँ तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ। बॉश भ्याकुम क्लीनरहरू प्रयोगकर्ताहरू द्वारा रुचाइएको।
नाम धेरैलाई परिचित नहुन सक्छ, तर तिनीहरू यस क्षेत्रमा अनुभव भएको कम्पनी हुन्। साथै, द karcher भ्याकुम क्लीनरहरू तिनीहरू धेरै शक्तिशाली भ्याकुम क्लीनरहरू बनाउनको लागि बाहिर खडा हुन्छन् जसले सधैं उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाइँ एक भ्याकुम क्लिनर खोज्दै हुनुहुन्छ जसमा शक्ति मुख्य कारक हो, यो विचार गर्न ब्रान्डहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूले धेरै प्रकारका (औद्योगिक, खरानी, ​​कार, स्लेज ...) पनि उत्पादन गर्छन्।
यो एक ब्रान्ड हो जुन उपभोक्ताहरूको ठूलो भागलाई पनि थाहा छ। सामान्यतया किनभने यो एक फर्म हो जसको उत्पादनहरू उनीहरूको गुणस्तर र समयको साथ राम्रो प्रदर्शनको लागि बाहिर खडा हुन्छन्। त्यसैले डाइसन भ्याकुम क्लिनर किन्नुहोस् भ्याकुम क्लिनर खोज्दा यो एक ग्यारेन्टी र सुरक्षित विकल्प हो। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरू (स्लेज, औद्योगिक, हात, झाडू...) उत्पादन गर्छन्।
यद्यपि ecovacs भ्याकुम क्लीनरहरू तिनीहरू अपेक्षाकृत नयाँ छन्, सत्य यो हो कि तिनीहरूको नेभिगेसन प्रणाली, सफ्टवेयर र प्रतिस्पर्धी मूल्यले तिनीहरूलाई रोबोट भ्याकुम क्लिनर खोज्नेहरूको लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक बनाएको छ। यदि तपाइँ एउटा किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यस कम्पनीका मोडेलहरू हेर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
भ्याकुम क्लीनर कसरी छनौट गर्ने
भ्याकुम क्लिनर खरिद गर्दा तपाईंले विवरणहरूको श्रृंखलालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यस तरिकाले हामी गलत मोडेल किन्ने डर बिना नै अधिक सटीकताका साथ निर्णय गर्न सक्छौं। तर, ती सबैलाई विचार गर्न र हामी वास्तवमा के खोजिरहेका छौं भनेर सोच्न महत्त्वपूर्ण छ। यी सबैले हाम्रो खोजलाई धेरै सजिलो बनाउनेछ। भ्याकुम क्लिनरलाई तपाईंको घरको लागि लगानीको रूपमा सोच्नु महत्त्वपूर्ण भएकोले, तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने उत्पादन किन्न चाहनुहुन्न।
अर्को विवरण जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ भ्याकुम क्लीनर छनौट गर्दा शक्ति हो। जब हामी भ्याकुम क्लिनरको स्पेसिफिकेशनहरू पढ्छौं हामी देख्छौं कि पावर संकेत गरिएको छ। यद्यपि यो परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ, हामीले त्यो नम्बरलाई संकेतको रूपमा लिनुपर्छ। यो त्यस्तो चीज होइन जुन हामीलाई सधैं बताउँछ कि यदि एक मोडेल अधिक शक्तिशाली छ।
त्यहाँ मोडेलहरू छन् कि कागजमा कम शक्ति छ र वास्तविकतामा तिनीहरू अझ राम्रो कामना गर्छन्। यस कारणले, यो राम्रो छ कि हामीले तिनीहरूले सामान्यतया शक्तिको बारेमा संकेत गर्ने संख्यालाई ध्यानमा राख्छौं, तर हामीले यसलाई तिनीहरूको वास्तविक शक्तिको सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ।
हामीलाई चासो के छ कि भ्याकुम क्लीनर शक्तिशाली छ। यस तरिकाले हामी घरमा जम्मा हुने फोहोर र धुलोलाई छिटो र सहज रूपमा समाप्त गर्न सक्षम हुनेछौं। तर, हामी धेरै शक्तिशाली भ्याकुम क्लिनर पनि चाहँदैनौं। किनभने यसले यसलाई सबै प्रकारका सतहहरूमा टाँस्छ। आदर्श रूपमा, भ्याकुम क्लिनरमा पावर रेगुलेटर हुन्छ। यसरी हामीले परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्न चाहेको शक्ति निर्धारण गर्न सक्छौं।
सामान्यतया, कर्डेड भ्याकुम क्लिनरहरू (जो मुख्यसँग जोडिएका छन्) ब्याट्रीबाट चल्नेहरू भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्। त्यसैले यो खातामा लिनको लागि एक विवरण हो। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू राम्रो छन्, किनभने ब्याट्री-संचालित भ्याकुम क्लीनरहरू पनि राम्रोसँग चूस्छन्। तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी यस बारे सचेत छौं र यो विवरणलाई ध्यानमा राख्छौं।
त्यहाँ अन्य विवरणहरू छन् जसले हामीलाई एक भ्याकुम क्लिनर अर्कोमा छनोट गर्दा धेरै मद्दत गर्न सक्छ। यी ती पक्षहरू हुन् जसको शक्ति वा ब्रान्ड जत्तिकै महत्त्व नहुन सक्छ, तर जसले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण, हामीले तिनीहरूलाई दिमागमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
गतिशीलता र प्रयोगको सहजता महत्त्वपूर्ण छ। हामी सधैं आरामसँग घर वरिपरि घुम्न सक्षम हुन चाहन्छौं। भ्याकुम क्लिनर तान्नु पर्दैन वा यो धेरै भारी छ। यो पनि कि हामी यसलाई प्रयोग गर्दा यो टिप छैन। तसर्थ, यी प्रकारका चीजहरू जाँच गर्नुपर्छ। विशेष गरी यो तपाईको लागि धेरै भारी छैन, किनकि अन्यथा घर सफा गर्ने कार्य पहिले नै भन्दा धेरै कठिन हुनेछ।
भ्याकुम क्लिनरको मर्मत र सफाई पनि खातामा लिनको लागि अर्को विवरण हो। किनकि हामी केहि चाहन्छौं जुन धेरै समय चाहिँदैन। यदि हामीसँग जम्मा छ भने, धेरै जसो मोडेलहरूसँग भएको चीज, सफाई र मर्मत सरल छ। केवल ट्याङ्की हटाउनुहोस्, यसलाई खाली गर्नुहोस् र कुनै पनि बाँकी फोहोर हटाउन यसलाई भिजाउनुहोस्। एउटा साधारण कार्य जसले केही मिनेट मात्र लिन्छ। थप रूपमा, हामीले झोला किन्न नपर्नेले बचत गर्छौं।
धेरै मोडेलहरूमा प्रकाश र ब्याट्री सूचक छ। यी थप विवरणहरू हुन् जसले हामीलाई भ्याकुम क्लिनरको प्रयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरू निस्सन्देह सकारात्मक र उपयोगी पक्षहरू छन्। यद्यपि तिनीहरू निर्णायक छैनन् वा हुनुहुन्न। कम्तिमा होइन यदि यसको मतलब भ्याकुम क्लिनरको मूल्य उच्च छ।
तपाईंले केबलसँग भ्याकुम क्लिनर किन्नुभएको घटनामा अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण, तपाईंले केबलको लम्बाइलाई ध्यानमा राख्नु हो। किनकि यो धेरै छोटो हुन सक्छ र यसले तपाइँलाई सफा गर्ने समयमा धेरै सीमित गर्दछ। किनकी हरेक पटक तपाईले कोठा परिवर्तन गर्दा तपाईले फेरि अनप्लग गर्नु पर्छ। त्यसैले एक लामो केबल अभ्यास मा धेरै सहज विकल्प छ।
आजका भ्याकुम क्लिनरहरूसँग फिल्टरहरू छन्। फिल्टरको प्रकार धेरैले ध्यान नदिने कुरा हो, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण विवरण हो। किनभने यसले पैसा र मर्मतसम्भारमा महत्त्वपूर्ण बचत गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले खोजिरहेको भ्याकुम क्लिनरमा फिल्टरको प्रकार जाँच्नु महत्त्वपूर्ण छ।
आज सबैभन्दा सामान्य यो हो कि यसमा HEPA फिल्टर छ। यो एक प्रकारको फिल्टर हो धेरै फोहोर अवशोषित गर्दछ। तर पनि, हामी यसलाई सजिलै सफा गर्न सक्छौं त्यसैले तपाईं यसलाई लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यस प्रकारको फिल्टर सफा गर्ने तरिका धेरै सरल छ। हामीले यसलाई भिजाउनु पर्छ, यसलाई सुकाउन दिनुहोस् र भ्याकुम क्लिनरमा फिर्ता राख्नुहोस्। एक सरल प्रक्रिया।
हामीसँग नीलो बत्ती फिल्टरहरू पनि छन्, केही प्रकारका भ्याकुम क्लिनरहरू जस्तै पानीमा पाइन्छ। तिनीहरू पनि सफा गर्न सकिन्छ र उच्च अवशोषण क्षमता छ। हावा शुद्ध गर्न मद्दत गर्नुको साथै। तर तिनीहरू केही धेरै विशिष्ट प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरूमा सीमित छन्।
अन्य भ्याकुम क्लिनरहरूसँग फिल्टरहरू छन् जुन HEPA प्रमाणित छैनन्। यस प्रकारका फिल्टरहरू सफा गर्न सकिँदैन, त्यसैले समय-समयमा हामी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न बाध्य छौं। प्रयोगकर्ताहरूका लागि सहज नभएको कुरा। थप रूपमा, यो पैसाको बर्बादी हो जुन धेरै अवस्थामा अनावश्यक छ।
त्यसकारण, हामीले भ्याकुम क्लिनरमा रहेको फिल्टरको प्रकारलाई परामर्श गर्न आवश्यक छ। हामीले सफा गर्न सक्ने फिल्टर हाम्रो लागि सबैभन्दा सुविधाजनक छ।
तार्किक रूपमा, मूल्य पनि एक विवरण हो जुन प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो बजेटको आधारमा हामीसँग निश्चित सीमाहरू छन् र त्यहाँ मोडेलहरू हुन सक्छन् जुन हामीले किन्न सक्दैनौं। त्यसकारण, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले कुन मोडेलहरू हाम्रो पहुँच भित्र छन्, विशेष गरी केही प्रकारका भ्याकुम क्लीनरहरूमा।
यदि तपाईं रोबोट भ्याकुम क्लिनर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, मूल्यहरू सामान्यतया सामान्य मोडेलहरू भन्दा बढी हुन्छन्। धेरै मामिलाहरूमा 400 यूरो भन्दा बढी। यद्यपि त्यहाँ ब्रान्डहरू छन् जुन मोडेलहरू 200 यूरो भन्दा बढी छन्। त्यसैले यो एक दीर्घकालीन लगानी हो, किनकि तिनीहरू लामो समयसम्म रहन्छन्। तर, यो मार्फत सोच्न महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ सबै मूल्यहरूको सामान्य भ्याकुम क्लीनरहरू छन्। हामी लगभग 80-90 यूरो बाट भ्याकुम क्लीनरहरू फेला पार्न सक्छौं जसले हामीलाई राम्रो गुणस्तर प्रदान गर्दछ। यद्यपि सबैभन्दा सामान्य हो कि तिनीहरू 100 यूरो भन्दा बढी खर्च गर्छन्, 100 र 200 यूरो बीचमा हामीले बजारमा धेरै मोडेलहरू फेला पार्छौं। एउटा दायरा जसमा विविधता छ तर जसमा हामी अझ सहज रूपमा जान सक्छौं।
केहि पनि तपाईलाई विश्वस्त छैन?
यदि तपाईंले भ्याकुम क्लिनर फेला पार्नुभएको छैन जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको कुरा अनुरूप छ, हामी निश्चित छौं कि तपाईंले यसलाई निम्न उत्पादनहरूको चयनमा फेला पार्नुहुनेछ:
त्यहाँ सबै भ्याकुम क्लीनरहरू पत्ता लगाउनुहोस् 🙂
औद्योगिक वा भिजेको भ्याकुम क्लीनरहरू जस्ता केही थप विशिष्ट प्रकारहरूको लागि, मूल्यहरू सामान्यतया अलि बढी हुन्छन्। यद्यपि त्यहाँ कुनै ठूलो भिन्नताहरू छैनन्। तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ, भविष्यमा अप्रिय आश्चर्यबाट बच्न। राम्रो पक्ष यो हो कि अधिक र अधिक ब्रान्डहरूले किफायती मोडेलहरू लन्च गर्दैछन्। ताकि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरू पहुँच गर्न सजिलो छ।
कुनै पनि अवस्थामा, यदि तपाइँ तपाइँको नयाँ भ्याकुम क्लीनरको खरिदमा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ वर्षको समयमा घटनाहरू छन् जसमा हामीले धेरै रसीला प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्छौं। यी मध्ये केही दिनहरू छन्:
भ्याकुम क्लीनरहरूमा कालो शुक्रबार
साइबर सोमबार भ्याकुम क्लिनरहरूमा
भ्याकुम क्लीनरहरूमा प्राइम डे
त्यसकारण, हामीले बजारमा सस्तो भ्याकुम क्लीनरहरू फेला पार्छौं। त्यहाँ मोडेलहरू छन् जसको मूल्यहरू केही अवस्थामा लगभग 60 यूरोबाट सुरु हुन्छ। तर, प्रायः 100 र 200 यूरो बीचको खण्डमा हुन्छन्। राम्रो कुरा के हो भने आज भ्याकुम क्लिनरको गुणस्तर उच्च छ। त्यसैले 100 यूरो भन्दा कम मूल्यका मोडेलहरूले पनि तपाईंलाई राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्नेछ।
प्राइम डे भ्याकुम क्लीनरहरू
साइबर सोमबार भ्याकुम क्लीनरहरू
कालो शुक्रबार भ्याकुम क्लीनरहरू
सस्तो भ्याकुम क्लीनर 2022 - गोपनीयता नीति - कुकीहरूको बारेमा जानकारी